मोहनराज रेग्मी, अध्यक्ष, नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)
‘राष्ट्रिय समृद्धि र सुशासन साझा अभियान, पेशागत हकहित र क्षमता अभिवृद्धि हाम्रो अडान’ प्रमुख नारासहित स्थापना भएको नेपाल अडिटर्स एसोसिएसन (अडान)ले मंगलवार (आज) १५औं स्थापना दिवस मनाउँदै छ । स्थापना दिवसको पूर्वसन्ध्यामा अडानका अध्यक्ष मोहनराज रेग्मीसँग अभियानका मिलन विश्वकर्माले गरेको कुराकानीको अंश :
अडानको १५औं स्थापना दिवस कसरी मनाइँदैछ ?
यसअघि भौतिक रूपमा नै उपस्थित भएर स्थापना दिवस मनाउने गरेकोमा कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल्ली स्थापना दिवस मनाउन लागेका छौं । मंगलवार २ बजेदेखि जुममार्फत बेबिनार आयोजना गरी यस वर्ष स्थापना दिवस मनाउँदै छौं ।
मंगलवारको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, महालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा (दंगाल), नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी र नेपाल चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आइक्यान) अध्यक्ष मदन शर्मालगायतको सहभागिता रहने छ । साथै, एसीसीए ग्लोबलका पदाधिकारीहरूको समेत सहभागिता हुने छ । यो अवसरमा अडानले एसीसीए ग्लोबलसँग विशेष सम्झौता गर्ने तयारी पनि गरेको छ ।
अडानले स्थापनाको १५औं दिवस मनाउँदै छ । १५ वर्षको यो यात्रामा अडानले के–कस्ता कामहरू गर्‍यो ?
स्थापनाकालदेखि नै लेखापरीक्षकहरूको क्षमता, दक्षता अभिवृद्धि गर्ने काम गर्दै आएका छौं । साथै, पेशालाई मर्यादित बनाउने विषयमा पनि हामीले काम गर्दै आएका छौं । यसबाहेक समयअनुसार लेखापरीक्षक साथीहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयमा पनि काम गरेका छौं । पछिल्लो समय लेखापरीक्षणका सम्बन्धमा अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासलाई अवलम्वन गर्ने काम पनि गर्दै आएका छौं । सोहीअनुसार नै अडिटर साथीहरूलाई सक्षम बनाउँदै लगेका छौं । समग्रमा १५ वर्षको यात्रामा उपलब्धिमुलक नै छ ।
लेखापरीक्षकहरूको के कस्ता पेशागत समस्या छन् ?
लेखापरीक्षकहरूको पेशागत समस्या धेरै छन् । सर्वसाधारणले लेखापरीक्षणसम्बन्धी सबै काम अडिटरले नै गर्ने बुभ्mदछन् । तर, त्यस्तो होइन । खासमा हामीले लेखापरीक्षणको सम्बन्धमा राय सुझाव मात्र दिने हो । त्यसपूर्व तयार गर्नुपर्ने प्रतिवेदनलगायत सामग्री सम्बन्धित संस्थाको व्यवस्थापकहरूले नै गर्ने हो । यसमा सर्वसाधारणहरू स्पष्ट हुन आवश्यक छ ।
अहिले कोरोनाले गर्दा हामीलाई काम गर्न जोखिम बढेको छ । लेखापरीक्षणको सिलसिलामा कतिपय अवस्थामा भौतिक रूपमा नै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यता छ । यसबाट कोरोनाको जोखिम पनि त्यतिकै छ । हामीले यस्तो अवस्थामा पनि आप्mनो कामलाई निरन्तरता दिन अडिटरहरूलाई आवश्यक तालीम प्रदान गर्दै आएका छौं ।
लेखापरीक्षकहरूको समस्याप्रति सरकार कत्तिको गम्भीर भएको पाउनुहुन्छ ?
हाम्रो नियामक निकायको रूपमा आइक्यान छ । तर, आइक्यानले हामीलाई जसरी नियमन गर्नु पर्ने हो, त्यो अनुसार भएको छैन । हाम्रो क्षेत्र नेपालभर नै छरिएको छ । तर, आइक्यानले सीमित ठाउँमा मात्र नियमन गर्छ, अब नियमनको दायरा फराकिलो बनाउन पर्छ ।
आगामी दिनमा अडानले के–कस्ता काम गर्न आवश्यक छ ? साथै, तपाइर्“ अध्यक्ष पदमा भइरहँदा के–कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
अबको हाम्रो मुख्य काम नै लेखापरीक्षण कार्यलाई अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अगाडि बढाउने हो । तर, त्यसमा ठूलो चुनौती छ । साथै, अडिटरहरू पनि समाजका अंग हुन भनेर स्पष्ट पार्न बाँकी नै छ ।
अडानले विगत लामो समयदेखि एक व्यक्ति एक पेशाको मुद्दा उठाइरहेको छ । यसमा अहिले के भइरहेको छ ?
‘एक व्यक्ति एक पेशा’ को मुद्दालाई २०७८ सम्मका लागि सारेका छौं । त्यसपछि अडिटरहरूले दुई ओटा पेशा गर्न पाउने छैनन् । उनीहरू कि लेखा परीक्षणको काममा नै आउनु प¥यो कि जागिरमा जानु पर्‍यो । दुबैतिर काम गर्न पाउने छैनन् । यद्यपि, विशेष अवस्थामा अडिटरहरूले दुईतिर काम गर्न पाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ । विशेषगरी दूरदराजमा लेखापरीक्षणको काम गर्न पर्‍यो भने यो सिद्धान्त लागू हुँदैन ।
कृषिका सबै सुविधा ग्राहकलाई एकद्वार प्रणालीबाटै दिनुपर्छ[२०७७ मंसिर, १८]
कम जोखिम र उच्च प्रतिफल सहितको सुरक्षित लगानीमा जोड दिएका छौं[२०७७ मंसिर, १४]